Kubva Nyamavhuvhu 24-31, Apple ichapa $ 1 kuNational Park Foundation pakutenga kwese kunoitwa neApple Pay paApple Chitoro | Ndinobva mac
Apple Pay neApple Watch zvinobatsira vatengi kuchengetedza mapaki emunyika eUS uye mushure mekudzidza nezve dambudziko remitambo rakagadzirirwa vashandisi veApple Watch kwavanogona kuwana zvitambi uye menduru pavanenge vachiita Maminitsi makumi mashanu ekurovedza muviri anotevera Gunyana 50, chipo che $ 1 chinowedzerwa pakutenga kwega kwega kunoitwa neApple Play muApple Chitoro. Iyi mipiro yakatanga muna Nyamavhuvhu 24 uye ichaenderera kusvika inotevera 31.
Mipiro inoenda kuNational Park Foundation
Mune ino kesi, mari yawanikwa ichabatsira National Park Foundation muchinangwa chayo chekuchengetedza mapaki emunyika nemapurojekiti senge kudzoreredza nzvimbo dzekugara uye kuchengetedza nhoroondo, uye zvakare ichakurudzira chizvarwa chinotevera kuchengetedza masango mapurogiramu senge Open OutDoors yeVana.
CEO Tim Cook pachake, yakatsanangurira vezvenhau kukosha kwemapaki aya uye pamusoro pezvese zvido zvekubatsira kuchengetedza kwavo nerudzi urwu rwekubatsira mari:
Mapaki emunyika eAmerica hupfumi hwatinofanira kufara tese, uye tinodada kupa zvakare mwedzi uno nekupa $ XNUMX pakutenga kwese kunoitwa neApple Pay pane chimwe chezvitoro zvedu. Idzi inzvimbo dzakanaka nenhaka yerudzi rwedu, uye Apple inoda kuita chikamu chedu kuvachengetera kumazera emangwana, asingajairike, akanaka uye emusango sezvatinovawana.
Wagadzirira kuhwina menduru muna Gunyana 1?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kubva Nyamavhuvhu 24-31, Apple ichapa $ 1 kuNational Park Foundation pakutenga kwese kunoitwa neApple Pay paApple Chitoro
Screen rekodhi, imwezve imwe nzira kune QuickTime yekurekodha skrini yeMac yedu
Chii chinonzi Apple mupfungwa maererano ne12-inch MacBooks uye MacBook Airs?